နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံပွဲ မင်းဘူးမြို့၌ ပြုလုပ် - Yangon Media Group
မကွေး၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့တမာတန်း၌ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ထောက်ခံပွဲကို ပါတီ အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်းမဟုတ်ဘဲ အမေစုကို ချစ်သူများ၊ အမေစုကို ထောက်ခံသူများ စုပေါင်းကျင်းပခြင်းဖြစ် ကြောင်း အမေစုထောက်ခံပွဲဆောင်ရွက်ရန် ဦးဆောင်ကျင်းပသူတစ်ဦး အဖြစ်ပါဝင်သည့် ဦးမြင့်နိုင်က ပြောသည်။
”ပြီးခဲ့တဲ့လ ၁၉ ရက်နေ့က အမေစုရဲ့မိန့်ခွန်းကို ထောက်ခံတာပါ။ ပြီးတော့ပြည်သူလူထုက အမေစုနဲ့တစ်သားတည်း ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြချင်တဲ့သဘောနဲ့အမေစု နဲ့လက်ရှိအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ထောက်ခံပွဲလုပ်တာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းထောက်ခံပွဲသို့ မင်းဘူး မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများလာရောက်ကြပြီး အမေစုထောက်ခံပွဲတွင် အမေစုရုပ်ပုံပါ အင်္ကျီဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ခြင်း WE STAND WITH YOU ဆိုသည့် ခေါင်းစည်း များခေါင်းတွင်စည်းခြင်းဖြင့် အမေစုကို ထောက်ခံခဲ့ကြကာ ထောက်ခံပွဲတွင် မင်းဘူးမြို့မှ သုခမိန်တီးဝိုင်း၊ မကွေးမြို့မှ မျိုးဇော်ဗိုလ်ဆိုင်းတို့က ဖျော်ဖြေခဲ့ကြကာ စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးက ဟောပြောခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံပွဲကျင်းပရန် အခမ်းအနားအပြင် အဆင်နှင့် တီးဝိုင်း၊ ဆိုင်းဝိုင်းကို အခကြေးငွေမယူဘဲ ဒေသခံများက ဝိုင်းဝန်းပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အစ္စရေး ဂိုလန်ကုန်းမြင့်ဒေသသို့ ဆီးရီးယားဘက်မှ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆန်ကျ၊ အစ္စရေးက ပြင်းထန်စွာ သ??
စီမံကိန်းများ အချိန်မီ မပြီးသဖြင့် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံသည့် အနေဖြင့် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်း??